Col. Koofi oo safar caafimaad dibadda ugu maqnaa oo dalka dib ugu soo laabtay maanta – Radio Muqdisho
Col. Koofi oo safar caafimaad dibadda ugu maqnaa oo dalka dib ugu soo laabtay maanta
Kaaliyaha Taliyaha Hey’adda Sirdoonka iyo Nabadsugidda Qaranka, ahna taliyahii hore ee nabad sugidda gobolka benaadir ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtey, taliyaha oo fasax caafimaad ugu maqnaa dalka dibadiisa ayaa isaga oo caafimaad qaba dalka kusoo laabtey kadib markii qaliin looga sameeyey madaxa oo hore dhaawac uga soo gaarey intii uu ku guda jirey waajibaadkiisa shaqo.
Taliyaha ayaa sheegey in qaliin lagu sameeyey, laguna guuleystey isla markaana uu hadda caafimaad qabo, waajibaadkiisa shaqana uu sii wadan doono. Taliyaha oo intii uu isbitaalka ku jirey ay saxaafadda qaar soo qoreen warar been abuur ah oo ahaa inuu yurub iska dhiibey ayaa sheegey inuusan laheyn dhaqankaas, isla markaana wararkaas been abuurka ah ay sameeyeen cadowga, iyo shaqsiyaad u adeega kuna dhex jira systemka dowliga ah, si fiicanna uu u fahamsan yahey ujeedadooda. Waa shaqsiyaad cadowga u adeega iyo qaar umadda dhib iyo dulmi ku hayey iyaga oo masuuliyad sheeganaya oo aan gacan culus ku qabaney. Shaqsiyaadkaan ayaa caadeystey iney markasta saxaafadda dhumiyaan.
Taliyaha ayaa ka mahadceliyey dhiiragelintii iyo ducaddii uu ka helayey asxaabta iyo qoyskiisa intii uu kujirey isbitaalka. Sidoo kale wuxuu u mahadceliyey saxaafadda iska diidey been abuurka cadowga.
“Sawirro”Maamulka iyo shaqaalaha Bay’adda oo ka hadlay joojinta xaalufinta deegaanka
"Sawirro"Maamulka iyo shaqaalaha Bay'adda oo ka hadlay joojinta xaalufinta deegaanka